UPDATE: Labada Aqal ee BF Somaliya oo berri kulan xasaasi ah yeelanaya | HalQaran.com
UPDATE: Labada Aqal ee BF Somaliya oo berri kulan xasaasi ah yeelanaya
Muqdisho (Halqaran.com) – Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, (Golaha Shacabka iyo Aqalka sare) ee dalka ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta berri oo tallaado ah yeeshaan kulan xasaasi ah oo arrimo muhiim ah looga hadli doono.
Wararka ay haleyso Halqaran.com, ayaa sheegaya, in ajandaha kulankaasi uu yahay meel marinta habraaca ansixinta dib u eegista dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Qaar ka mid ah xildhibaannada golaha shacabka Soomaaliya ayaa mareegta Halqaran.com u sheegay, in kulanka tallaada berri ah ay wada yeelan doonaan labada aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Dhammaan xildhibaannada ayaa lagu wargeliyay inay soo xaadiraan kulanka maalinta berri ah, ayna waqti fiican ay xarunta yimaadaan.
Labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaaliya